शरिरमामा मोटोपन बडेर हैरान हुनुहुन्छ ? चिन्ता नलीनुस, यसरी घटाउन सकिन्छ –
शरिरमामा मोटोपन बडेर हैरान हुनुहुन्छ ? चिन्ता नलीनुस, यसरी घटाउन सकिन्छ
धेरै कारकहरू छन् जुन हाम्रो शरीरको आकार निर्धारण गर्न सक्छन्स् जस्तै- वँशानुगत, जीवनशैली, लिंग र उमेर। केही व्यक्तिहरूले फ्राइ फुड , जङ्क फुडहरु धेरै खानेगर्छन् तर कहिल्यै तौल बढ्दैन। केही व्यक्तिहरुको हिप, थाइ वरिपरि फ्याट संकलन हुन्छ र केहि व्यक्ति हरुको पेट मा।
शरीरमा समग्र फ्याट वितरणमा आधारित, अधिक व्यक्तिहरू यी शरीर आकारको कोटीहरूमा पर्न सक्छ । Apple shape,PEAR Shape,Hourglass shape,Inverted triangle shape ,Ruler shape
Apple shape:– शरीरको बनावट गोलो र अरु भाग को तुलनामा पेट को भाग ठुलो र चाख्लो हुनुलाई pear shape:-भनिन्छ।
pear shape:- हिप, थाई lower parts को तुलनामा माथि कजयगमिभच को भाग साँगुरो हुने शरिरको बनावट लाई pear shape भनिन्छ ।
Hourglass shape:- शरिरको माथिको भाग र तल्लो भाग वरावर रुपमा हुने तर कम्मरको भाग सानो हुने शरिरको वनावटलाई Hourglass shape भनिन्छ। प्राय गरेर यो बनावट सेलिब्रेटि हरुको हुनेगरेको पाईन्छ ।
Inverted triangle shape:- तल सुकेको र माथि फुकेको शरिरको बनावटलाई inverted triangle shape भनिन्छ । यस्तो शरिरको बनावट मा upper part shoulder, breast को तुलनामा lower part hips thigh सानो हुन्छ ।
Ruler shape:- शरिरको माथिदेखि तल सम्मको भाग एकनास को हुने शरिरको बनावटलाई च्गभिच कजबउभ भनिन्छ । यस्तो शरिरको बनावट मा Shoulder, breast, waist, hip, thigh सबै बराबर हुन्छ ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाई कस्तो आकार को हुनुहुन्छ भन्ने होईन, तर त्यो आकारले तपाईको स्वास्थ्यको लागि के अर्थ राख्छ र तपाई कसरी स्वस्थ रहनको लागि आफ्नो जीवनशैली राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हो। वास्तवमा कुनैपनि आकारको मोटोपन स्वास्थ्यको दृस्ठिकोणले हानिकारक नै मानिन्छ । स्याऊ आकारको बनावट को मोटोपनले अझ बढी समस्या निम्त्याउने भएकोले आज हामि स्याउ आकारको बनावट को बारेमा चर्चा गरेका छौं।
Apple shape स्वास्थ्य जोखिम
पेटको मोटाई सम्भवतः सबैमा सबैभन्दा खतरनाक हो, र स्याउको शरीरको आकार स्वास्थ्य समस्याहरूको लागि शरीरको अन्य प्रकारको तुलनामा उच्च जोखिमको रूपमा लिइन्छ। ठूलो कम्मरको मतलब हृदय रोगको उच्च जोखिम हुन सक्छ। यसले टाइप २ मधुमेहको उच्च जोखिम पनि बुझाउन सक्छ। यदि तपाईं स्याउको आकारको हुनुहुन्छ तर अत्यधिक तौलको हुनुहुन्न ( जसको मतलब तपाईंको बडी मास (BMI) 25 भन्दा कम छ ) तपाईं अझै पनि अरु body shape BMI 25 भन्दा माथी हुने मानिसहरु भन्दा मुटुको रोग, क्यान्सर र मधुमेहको लागि बढी जोखिममा हुनुहुन्छ।
तपाईंको कम्मर वरिपरि भएको बोसोले किन यति धेरै समस्या सिर्जना गर्न सक्छरु शरीरका अन्य भागहरूमा भएका फ्याटभन्दा फरक, पेटको क्षेत्रको फ्याट हिमशिलाको (iceberg) जस्तो हुन्छ।
यहाँ किन पेट बोसोले यति धेरै समस्याहरू निम्त्याउँछ ?
यो तपाईंको पेट गुहा भित्र गहिरो बढ्छ र अंगहरू बीच ठाउँ भर्छ।बेली फ्याट्सले तपाईंको मेटाबोलिजममा कडा प्रभाव पार्छ।यसले फेटि एसिड र पदार्थहरू रगतमा जारी गर्दछ जुन कलेजोसँग जोडिएको छ। यसले मेटाबोलिक सिन्ड्रोम निम्त्याउन सक्छ जसले प्यानकिराजको उत्पादन घटाउन सक्छ। जसको परिणाम स्वरुप तपाईको रगतमा सुगर को मात्रा उच्च रहन्छ र तपाईं मधुमेह को खतरामा पर्नसक्नुहुन्छ। थप रूपमा, फ्याटी सेल्सहरूले भड़काऊ प्रतिक्रिया ट्रिगर गर्न सक्दछ जसले साइटोकिन्स भनिने पदार्थ रिलिज गर्दछ। यो पदार्थ हृदय रोग को पछाडि एक कारण हो।
एक स्वस्थ आहार र राम्रो योग अभ्यास , ब्यायाम अनुसरण गरेर आफ्नो बढी भएको तौललाई कम गर्न सकिन्छ । यसको लागि सम्बन्धित प्रशिक्षक संग परामर्श लिएर मात्र अभ्यास गर्नु पर्ने हुन्छ नत्र गलत परिणाम पनि निम्तिन सक्छ ।
मोटोपन घटाउन प्रतिदिन कम्तीमा 1 घण्टा ब्यायाम गर्ने
चिनी, पिज्जा, बर्गर्स साथै अन्य junkfood , मैदाको परिकारहरु , सेतो आलु ले तपाईंको शरीरको रगतमा चिनीको मात्रा लाई बढाइ दिन्छ र अधिक फ्याट उत्पादन गर्दछ। त्यसैले यस्ता खानेकुराहरु नखाने,अधिक फलफूल र तरकारीहरू खाने, कम फ्याटी प्रोटीन भएको खनेकुराहरु आफ्नो खानामा समबेश गर्ने,बेलुकाको खाना सुत्नुभन्दा3घण्टा अगाडि नै खाने।
–मनिषा अधिकारी,योग तथा फिटनेस प्रशिक्षक (jiva slim and health care)
« २५४० नया कोरोना संक्रमित काटमाडौं उपत्यकामा थपिए
तुलसीपुर उपमहागनरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डेसहित २१ जनामा कोरोना संक्रमण »